တရုတ် လိုအပ်ချက်၊ အင်တာနက် ဈေးကွက်နဲ့ မြန်မာ သတို့သမီးများ | ဧရာဝတီ
အက်ကို ဟယွိ| December 20, 2012 | Hits:22,526
17 | | Burmese Bride Matching ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ တွေ့ရတဲ့ မြန်မာ သတို့သမီး တဦး
တရုတ် လယ်သမားတွေဟာ သူတို့နိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီး နည်းပါးလို့ သတို့သမီး ရှားပါး ပေမယ့် အခုအခါမှာ အင်တာနက် အွန်လိုင်း တွေအပါအ၀င် တရားမ၀င် နည်းလမ်းတွေနဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို ဇနီးမယားအဖြစ် လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်နေကြပါပြီ။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ တအိမ်ထောင် ကလေးတယောက် မူဝါဒချမှတ်ထားတာ ကြာပါပြီ။ ယောက်ျားလေးကိုသာ အလေးထား မွေးကြ တာတွေ ရှိနေပြီး မိန်းကလေးကို မယူချင်ကြ၊ မမွေးကြတာတွေကြောင့်လည်း ကျား-မ ဦးရေ ကွာဟနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အရွယ်ရောက် တရုတ်လယ်သမား လုလင်ပျိုတွေဟာ သူတို့အတွက် သတို့သမီး ရှားပါး နေတဲ့အပြင် လယ်သမားဖြစ်နေ လို့လည်း တရုတ် မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု မရ၊ တရုတ် ရိုးရာအရ မင်္ဂလာခန်းဝင်ပစ္စည်းလည်း မတင်နိုင်ကြ။ ဒါကြောင့် တရုတ် လယ်သမားတွေဟာ အနီးအနားဒေသ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက သတို့သမီး ရရှိရေး အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးပမ်းလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယီဟေလျန်းက“မြန်မာသတို့သမီး ရဖို့က စရိတ် သက်သာတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ (တရုတ် လယ်သမားတွေ) လိုချင်ကြ တာ”လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ယီဟေလျန်းဟာ မြန်မာဇနီးသည်နဲ့ပေါင်းသင်းပြီး သမီးလေးတယောက်နဲ့အတူ မြန်မာနယ်စပ်အနီးက ရွာလေးတရွာမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ အခုလို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းဖို့ အတွက် တရုတ်ယွမ် ၅၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀၀) ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီကုန်ကျ စရိတ်ကို တရုတ် သတို့သမီးအတွက် ရိုးရာအရ ကုန်ကျမယ့် ယွမ် ၁၀၀၀၀ နဲ့လည်း သူက နှိုင်းယှဉ်ကြည့် နေပါသေး တယ်။
သူဟာ တရားမ၀င် သတို့သမီး ကုန်ကူးတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေကို သုံးပြီး သူ့ဇနီးကို ၀ယ်ယူခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျေးလက်ဒေသ တရုတ်လယ်သမားတွေ ကြားမှာတော့ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုပြီး သတို့သမီး ရှာဖွေမှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှိလာ နေပါပြီ။
တခြား သတို့သမီး ကုန်ကူးတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေလို “မြန်မာသတို့သမီး ရွေးချယ်ရာ”(Burmese Bride Matching) ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာလည်း ရွေးချယ်လို့ရမယ့် မြန်မာ အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံတွေ တင်ပြပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ရွေးချယ် ၀ယ်ယူလိုသူတွေ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
“အမျိုးသမီးအတွက် ယွမ် ၈၀၀၀ ပေးရမယ်၊ ပြီးတော့ ယွမ် ၅၀၀၀ ကို မင်္ဂလာခန်းဝင်ကြေး ပေးရမယ်”လို့ အမည်မဖော်လိုသူ အမျိုးသား တဦးက ပြန်ဖြေပါတယ်။
၀က်ဘ်ဆိုက် တချို့မှာတော့ အဆင်ပြေသလို ရောင်းဝယ်ကြတာတွေ ရှိပေမယ့် “မြန်မာသတို့သမီး ရွေးချယ်ရာ” (Burmese Bride Matching) ဆိုတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာတော့ ၀ယ်ယူလိုသူ အနေနဲ့ တကိုယ်ရည်ဖြစ်ရမယ်၊ ရိုးသားရမယ်၊ စိတ်ရင်းကောင်းရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံရမှာဖြစ်ပြီး နှိမ်ချ ဆက်ဆံတာမျိုးတွေ၊ လောင်းကစားလုပ်တာတွေ မရှိရဘူးလို့လည်း ဖော်ပြပေးထား ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ ခေတ်သစ် ငွေဝယ်ကျွန် စနစ် ပုံစံတမျိုးသာ ဖြစ်တယ်လို့ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်သူတွေက ပြော ဆို ကန့်ကွက်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည် ယူနန်နယ်မှာတော့ ဇနီးမယားအဖြစ် လူကုန်ကူးခံရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေဟာ ပျမ်းမျှ အသက် ၁၄ နှစ်ကနေ ၂၀ ကြား အရွယ်တွေ ဖြစ်ပြီး အသက်အကြီးဆုံးက ၅၇ နှစ်၊ အငယ်ဆုံး ၁၁ နှစ်အထိ ရှိတယ်လို့ ဒေသခံ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ ဦးဆောင်သူ တဦးဖြစ်တဲ့ လီချွန်ကင်းကလည်း ပြောပြပါတယ်။
တခါတရံမှာတော့ အိမ်ထောင် ပြုပြီးသား မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေလည်း လူကုန်ကူး ခံရမှုထဲမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပါဝင်နေ တယ်လို့ KWAT ရဲ့ ၂၀၀၈ က ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ KWAT အဖွဲ့ဟာ လူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လာမယ့် လထဲမှာ အစီရင်ခံစာဆက်လက် တင်ပြဖို့ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
“တရုတ်တို့ ဘာကြောင့် သတို့သမီး လိုအပ်ချက်မြင့်မားရသလဲ”
တရုတ်ပြည်မှာ သတို့သမီး လိုအပ်ချက် မြင့်မားလာတာဟာ အစိုးရရဲ့ တအိမ်ထောင် ကလေးတယောက် မူဝါဒနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မိန်းကလေးထက် ယောက်ျားလေးကိုပဲ လိုချင်ကြတာကလည်း တရုတ်တို့ ရိုးရာယုံကြည်မှုပါ။ အဲဒီယုံကြည်မှုကြောင့် တရုတ်တွေဟာ ယောက်ျားလေး မွေးဖွားလာဖို့သာ အလိုရှိပြီး မိန်းကလေး မွေးဖွားလာတာကို အလိုမရှိကြပါ။ တအိမ်ထောင် ကလေး တယောက်မှာလည်း မိန်းကလေးဆိုရင် မယူလိုဘဲ ယောက်ျားလေးသာ ရွေးချယ်ရင်း တရုတ်မိသားစုတွေမှာ ယောက်ျားသား ဦးရေ ပိုမိုများပြား လာတာဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီ မူဝါဒနဲ့ ရိုးရာယုံကြည်မှု အစွဲတွေကြောင့် မိန်းကလေး ရှားပါးလာလို့ လူကုန်ကူးသူတွေကို ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ ပေးပြီး ဇနီး မယား ၀ယ်ယူကြရတာ ဖြစ်တယ်”လို့ မွန်းနေလီက ပြောပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရရဲ့ ဇွန်လက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ စာရင်းအရ အရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာ လူဦးရေ ၁.၃ ဘီလီယံရှိပြီး ယောက်ျား ၁၁၇ ဦးမှာ မိန်းမ ၁၀၀ ပဲ ရှိကြောင်း၊ ၂၀၂၀ မှာတော့ တရုတ်လူမျိုး ယောက်ျားပျို ဦးရေ သန်း ၃၀ အထိ မြင့်တက် လာနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
တိုင်းပြည် အစွန်အဖျားက တရုတ်လူပျိုတွေ အနေနဲ့ ချမ်းသာပြည့်စုံမှု မရှိတဲ့အတွက်ကြေင့်၊ တရုတ်အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်မယူနိုင်ဘဲ တခြား ပိုဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံက ဇနီးသည်ကို ရှာရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
“ကျနော့် အဖေက လယ်သမား၊ အမေကလည်း လယ်သမားပဲ။ တရုတ် အမျိုးသမီးတွေက ကျနော့်ကို ဘယ်တော့မှ လက်ထပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကားကောင်းကောင်း၊ အိမ်ကောင်းကောင်းမှ မရှိတာကိုး”လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က မြန်မာ အမျိုးသမီး တဦးကို ဇနီးအဖြစ် ၀ယ်ယူခဲ့သူ တရုတ်အမျိုးသား တဦးက ဆိုပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဆိုအရ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ ယူနန်၊ ဖူကျင့်၊ ဟိုင်နန်၊ စိချွမ်နဲ့ အန်းဟွေ တွေမှာ လူကုန်ကူးခံရမှု မကြာခဏတွေ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။ အခြား အဖြစ်အပျက်တွေကတော့ တရုတ်ပြည် အရှေ့ဘက်ပိုင်း ပြည်နယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေမှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့်တော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ တရုတ်ပြည်ရောက်ပြီး ဇနီးအဖြစ် လူကုန်ကူးခံနေ ရတာဟာ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံ တွေထဲမှာ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတာရယ်၊ အဲဒီဆင်းရဲမှုကနေ လွတ်မြောက်ချင်တာရယ်တွေကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အစီရင်ခံစာမှာတော့“မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဇနီးအဖြစ် တရုတ်တွေဆီ ရောင်းစားဖို့ ပွဲစားဆီက တဆင့် ဆက်သွယ်ကြတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
“ပွင့်လင်း မြင်သာမှု နည်းပါးခြင်း”
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အမေရိကန် အစီရင်ခံစာ တခုမှာတော့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း မြန်မာအစိုးရဟာ လူကုန်ကူးမှု ဆိုင်ရာ အမှုပေါင်း ၁၇၃ မှု ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ၂၃၄ ဦးကို ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့မှာ အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး လေ့ကျင့်မှုပြည့်ဝတဲ့ ရဲအဖွဲ့ဖြစ်ဖို့၊ လုပ်ငန်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ရာမှာ ပွင့် လင်းမြင်သာမှုတွေ ရှိဖို့ စတာတွေ လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ပါရှိပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာပဲ တရုတ် ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနက ယူနန်ပြည်နယ်မှာ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေ လူကုန်ကူးခံရတာတွေ တားဆီးဖို့ အထူးရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီလို ဆောင်ရွက်ပေးတာဟာ လုံလောက်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှု မဟုတ်သေးဘူးလို့ KWAT က ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တကယ့်အဖြစ်မှန် တွန်းပို့ခံရတာတွေကို အရေးယူတာ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်သလို အကျင့်ပျက်ခြစား တာတွေနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေကြောင်း သူက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်ခင်ဝင်း (သို့မဟုတ်) လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်မှု၏ သားကောင်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment zaw December 20, 2012 - 8:28 pm	ECONOMICS $ JOBLESS, I read inabook 1950 or like that, some hotels bought the ladies who
were put in the bags that came from china.DO NOT FORGET WINN THA NU MINN.
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 21, 2012 - 3:30 am	မိန်းကလေး က လက်ခံ ကျေနပ်ရင် ဘယ်လို လူမျိုး ယောက်ျားနဲ့ ရသည်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ကို ဇနီးမယား အိမ်ထောင်ဘက် အနေနဲ့ တန်ဘိုးထား၊ အလေးပေးပြီး ဆက်ဆန်ရင် ငွေပေး ၀ယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ပွဲစားနဲ့ ရှာသည် ဖြစ်စေ ဘာမှ အပြစ်ဆိုစရာ မရှိပါ။ တခုပဲ မဖြစ်သင့်တာက မိမိစိတ်ဆန္ဒ မပါပဲ အတင်းအကြပ် ပေးစားခံရတာ၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ မပျော်ပေမယ့် ထွက်ပေါက်မရှိ၊ လွတ်လမ်းပိတ်နေတာ၊ ဇနီးမယားလို တန်ဘိုးထား မပေါင်းသင်းပဲ ငွေဝယ် ကျွန်လို လုပ်ချင်သလို လုပ်မယ် စိတ်မျိုးနဲ့ ဆိုရင်တော့ မကောင်းပါ။
Reply	Ne Win December 21, 2012 - 11:06 am	Right! You may wish and find what you want. Many women do the same. The problem is, you will be treated like slave if you are bought or you are trafficked. Your value may never be the same with the women who get married traditional way. I do not think you really know what you are talking about. Your belief and view tell that you are almost likea*****.
Reply	အကီး December 21, 2012 - 5:06 am	ဘိနပ်စီးတဲ့ ကြက် အကီးတို့ ဆီလာနေပြီ – – –
ဆေးမရှိတဲ့ ယောဂါ အကီးတို့ ဆီလာနေပြီ – – –
ပြည်ကီးသားများ လူဦးရေ လျှော့ချရေး အကီးတို့ မလုပ်တပ်ထာ စစ်ဗိုလ်ကီးများလုပ်ပေးနေသည် – – –
ကိုင်း – ရွာစားရေ – ရေကင်းသံပေးပြီး၊ ဘိနပ်စီးတဲ့ ကြက်တွေကို – ရေလုံအိုးကွဲ သီချင်းခန့် ကြီးနဲ့ ပို့ တော်မူပါ ဗျားးး
(ရေလုံအိုးကွဲ = မသာချရာ မသာလောင်းအိမ်မှဆင်းလျှင် ပစ်ပေါက်ခွဲလိုက်ရသော ရေအိုး)။
Reply	pucca anti racist December 21, 2012 - 5:12 am	Why are we keep silence for this disgusting,awkward news ? Where are the Burmese Races,sleeping ? If this kind of cases happened in Yakhine,what will they do ? Are they going to Kill,likes in Arakan States ? Because of Chinese,they are afraid,and they pretend,that ,they did’nt hear this news. Why no demonstration ? Well , I am not feeling bad for Rohinjar or Bangali,because, I am not Kalar,but, as an, anti racist minded,I really hates those one sided races. If ,we wants to protect our same races Burmese ladies or any ladies from Burma,we must fight like Yakhine problem or we must have the same feeling like, Yakhine’s problem. Don’t think that these Chinese are “Htay ya Wa Da,Buddhist,no, they are non believer, atheist or communist or may be confucius. (OR) are you agreed our Burmese ladies to become sex slave ???
Reply	ka lay December 21, 2012 - 6:52 am	တရုတ်ဆန့်ကျင်ဖို့လိုနေပြီး
သူတို့မြန်မာက ယူနေတာ သိပ်များနေပြီး။
Reply	Thet Aung December 22, 2012 - 11:18 am	ဒို့ခေတ်ကြမှ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ ဟို..နိုင်ငံ စစ်စစ် ဖြစ်ပြီဗျို့… 😀
Reply	ye January 3, 2013 - 4:26 pm	Help Myanmar national (Women)by ethic by the Myanmar people.
Reply	sawwainyo February 8, 2013 - 12:39 am	ပထ၀ီနိုင်ငံရေးအရ နယ်မြေခြင်းဆက်စပ်နေသလို မြန်မာပြည်ထဲက ထွက်သမျှ မြေပေါ်မြေ
အောက် ရေပေါ်ရေအောက် သက်ရှိသက်မဲ့ အားလုံး သိမ်းကြုံးယူပြီး ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု
နုန်း ဒုတိယနေရာအထိရောက်အောင်တက်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့ တာ ဗမာကညံ့လို့လား။ တရုတ်က တော်လို့လား။
စကားပုံ တစ်ခုလိုပေါ့။ ဘာတဲ့( ယာလည်းညက် ကြက်လည်းပမ်း) ဆိုတာလေ။ kia နဲ့ အစိုးရ
နောင်ဂျိန်ချလိုက်ကြတာ ယာရှင်ဖြစ်တဲ့ တရုတ်ကြီးက အသာလေးချောင်းကြည့်လိုက် လေပြေ လေးသွေးပေးလိုက်နဲ့လေ။ အခုပဲကြည့်လေ နမ့်ဟန်-မဘိန်း(ဗန်းမော်နယ် နဲ့-သျှမ်းပြည်နယ်ဘက်)က သစ်တွေ ကုန်ပါရောလား။ ပွဲကျနေတာပဲ။
တရုတ်ကြီးက kia နဲ့ မြန်မာအစိုးရကို သူ့ခါးပိုက် ထဲ ထည့်ထားတာ ။ စစ်တွေဒါလောက်ဖြစ်
နေတာ တရုတ်ကြီးက မှုတောင်မမှုဘူး။ မြန်မာ့စီးပွားရေးသမား တချို့ပြောကြတယ်။ (ခေတ်ပျက်မှာ စီးပွားရှာရတယ်) တဲ့ ဒါကို တရုတ်တွေက ကောင်းကောင်းသိကြတယ်။ ရွှေ သမင်ဘယ်ကထွက် မင်းကြီးတာကထွက်လေ။ စကားပုံကဆိုတယ် သားသမီးမကောင်း မိဘ
ခေါင်း။ တပည့်မကောင်း ဆရာ့ခေါင်း။ တိုင်းရေးပြည်ရေးမကောင်းတော့ ဘယ်သူ့ခေါင်းပါ